Ma waxaad ka hortagi doontaa WWF's Fortnite Challenge # NoBuildChallenge? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » TECH & TELECOM Ma waxaad ka hortagi doontaa WWF's Fortnite Challenge # NoBuildChallenge?
Fortnite waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan xilligan. Cinwaanku wuxuu dhiirrigeliyaa magac iyo shirkado badan. Ururka WWF waxay rabaan inay qaataan fursadda kor loogu qaado wacyiga ku saabsan ilaalinta deegaanka.
Sanduuqa Widefiga Adduunka ee Baxda (WWF) ayaa wadaagay tweet horraantii usbuucan tartanka #NoBuildChallenge on Fortnite. Si miisaanka loogu daro farriintiisa, ururku wuxuu soo xigtay magacyada ciyaartoyda caanka ah sida @Gotaga iyo @ Doigby. Qof walba waxaa lagu martiqaaday in uu qaato caqabaddan aadka u wayn.
WWF waxay billowday #NoBuildChallenge on Fortnite
Laakiin waa maxay xaqiiqda? Farriinta waxaa ka mid ah link to bogga sharxaya qaliinka. #NoBuildChallenge waxaa loola jeedaa in lagu martiqaado ciyaartoyda Fortnite iyo ciyaartoyda "dhamaan heerarka ay ku ciyaaraan iyaga oo aan isticmaalin khayraadka dabiiciga ah inta lagu jiro cayaartooda". Caqabad adag haddii aad taqaan Fortnite.
Fikradda ka dambeysa #NoBuildChallenge waa in kor loo qaado wacyiga "iyada oo aan haysan khayraad dabiici ah, way adag tahay in la noolaado". Inkasta oo su'aashan la daabacay bishii April 8, tartanka waxaa la furay kooxda Solary Fortnite on Twitch 5 April. Hawlgalku waa bilaw uun!
Le @WWFFrance furo #NoBuildChallenge on #Fortnite ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah. Waad ku mahadsantahay ciyaartoydii horeba uga qaybqaatay! 💚 @Gotaga, @Doigby miyuu kuu sheegi doonaa inaad culeyska ka qaadato caawa? #MasterKill #RoyalRumble pic.twitter.com/c1FuYgMYtJ
- WWF Faransiiska 🐼 (@WWFFrance) April 8, 2019
Cayaar adiga oo aan isticmaalin khayraadka dabiiciga ah, iskuna day inaad ku noolaato!
Dhowr bilood ka hor, WWF waxay Instagram u adeegsatay hawlgal kale oo isgaarsiineed, ololaha #TooLatergram. Isticmaalayaasha Webka ayaa markaa la weydiistay in ay la wadaagaan laba sawir oo leh carousel muujinaya meel qurux badan ka hor iyo ka dib hawada wasakhda.
Dhammaan macnaheedu waa wax fiican, ka dib oo dhan, si ay u kiciyaan niyadda. Haddii ay caqabad ku tahay cayaaraha fiidiyowga si aad uhesho dad badan, maxaayad?
Shaqaalihii hore ee Valve waxay u maleyneysaa in Dukaanka Cayaaraha Epic uu yahay war wacan ee warshadaha ciyaaraha
Madaxa shirkadda Ubisoft wuxuu sharxayaa cadaadiska ay soo saartay Splinter Cell Game
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/tenterez-vous-le-defi-fortnite-nobuildchallenge-de-la-wwf-312382